War - Sidee Loo Nadiifi Karaa Muraayada Muraayad Talaabo Talaabo ah?
Sidee loo Nadiifiyaa Muraayada Muraayada Hore Talaabo Talaabo ah?
Had iyo jeer gaashaanka ugu diyaari shukumaan weyn ama maro cudbi oo jilicsan. Shukumaanka waa in lagu qooyaa biyo laguna dhigaa gaashaanka ugu yaraan 5 daqiiqo si waxyaabaha loo jilciyo. Ka qaad tuwaalka oo ku tuuji biyaha korka gaashaanka iyadoo aad si fudud qashinka ugu dhaqaajineysid gacantaadana. Hayso nalka cadaadiska si aad uga fogaato xoqida dusha. Waxa fiican inaad u haysatid shukumaankan wixii loogu talagalay oo keliya. Waa inaan loo isticmaalin marxalad kale oo ah dayactirka muraayada hore wasakhda wasakhda iyo qashinka. Si joogto ah u dhaq tuwaalka qoynaya.
Nadiifinta iyo Daaweynta Ugu Dambeysa
Mar haddii shaashadda ay ka madax bannaan tahay dhammaan cayayaanka iyo wasakhda, waxaa la joogaa waqtigii aad samayn lahayd nadiifinta iyo daaweynta ugu dambeysa. Daaweyntan kama dambaysta ah waxay caadi ahaan ku lug leedahay ka bilaabmidda shamac khafiif ah ama filim daahan shaashad nadiif ah si loo kala firdhiyo biyaha loona sameeyo ka-qaadista cayayaanka, wasakhda iyo qashinka burburka fudud ee nadiifinta mustaqbalka.
Alaabada Featured - Khariidadda bogga Baaskiilka Gaaska Baaskiilka, Baaskiil Baaskiil Flat ah, Rakibaadda Iskuulka Kawasaki, Vespa Gts 300 Gtv Rakaabka Shandadaha, Vespa Gts Gtv 300 Boorsada Iskuulka, Muraayada hore ee Honda Nmax,